Ndakasvirwa nefudza mombe ndayenda kumusha ndikabva ndakanganwa kuti ndakaroorwa
Yedu yekuda kuroorwa iyi, ndainge ndaroorwa nemumwe business men wemuHarare apa ndainge ndakakurira mutown. Murume wangu mari ayinge ayinayo zvekuti zvese zvandaida andipa zvese I even had driver wangu anondiyendesa kwese kwandinoda not kuti handigone kudriver asi ndaitova nayo yangu drivers licence asi ayingoti handidi kuti ufambe wega. Murume wangu aigara ari busy most of the time asi chainge asingakanganise kuyenda kunoona baba namai vake vaigara kumusha and inini everytime yaainditi tiyende tese ndaingoita excuse ndisingade kuyenda ikoko chokwadi ndainge ndisina anything against vabereki vake but kuyenda kumusha was just not in me. Last time yainge ayenda kumusha ndakamuudza kuti tinoenda tese next time but paakati tiyende ndakabva ndaita imwe excuse haana kana zvaakataura akabuda mumba akapinda mumota yake ndokuyenda kumusha.
Ndakazviona kuti munhu ainge atsamwa so ndokubva ndabvunza driver wangu kuti aziva here kumusha kwacho, akati ehe akamboyenda nemurume wangu. Ndakapinda mutown ndikatenga ka grocery ndokubva ndaisa muboot, murume wangu akayenda Friday inini ndokutevera Saturday yacho ndikasvika ava masikati , akavhunduka kuona mota ichisvika, zvikanzi ko chii chaitika ndikati ndakazviona kuti watsamwa saka wanted to surprise you.Ndakawona munhu achisekerera paakazonzwa kuti ndaizosara for another week ndakawona munhu achifara kana husiku hwacho ndakasvirwa zvekuti ndakanyatsonzwa kuti uyu ndiye murume wandikarorwa naye. Musi iwoyo ndakaitya position yese zvandainge ndatokanganwa.
Murume wangu akamuka achigadzirira kidzokera kuHarare ndokubva ayenda hake ndibva ndasiirwa mumwe mukomana aifudza mombe ndiye akanzi zvese zvandinoda afanirwa kundibatsira nekuti driver wangu ainge adzokera nemurume wangu vachiti ndozodzoka ndega kuti ndizoziva road kuyitira next time kana ndikada kuuya ndega. Vamwene vangu vainge vafara zvekuti vaishaya zvekuita nemufaro, vakangosimbisa kuti kana pane zvaurikuda muroora unotaura nemukomana uyo. Mukomana aiyita kunge wezara rangu ainge akati rebei kundipfuura saka semunhu ayitya ndakamuti anotorara mudinning yeimba yedu yainge yakavakiswa nemurume wangu and it almost looked the same like imba yedu yekuHarare.First day takarara hedu zvakanaka tichibva tamuka hedu ndokubva ayenda kunofudza mombe akaswera asipo.
Ndakaswera ndichiita mabasa epamba ndichifara hangu navamwene vangu asi from ndakatanga kunzwa beche richiita chiveve apa ndifunge kuti baba vekwangu vainge vari kuHarare apa ndaizovaona weekend. Ndakatombotanga kufunga kuti ndichaita seyi nemazuva ainge asara, husiku ihowo ndakashaya hope nezemo ndipo pandakati ndimuke kuyenda kutoilet wanike mukomana wemombe akafa nehope asina kunyatsofuga apo ainge akarara ane chitsvimbo chaibudikira panze ndikati ndiite tsitsi ndimufugidze zvakanaka ndibvise chimuti chiye aah aaah Dr Sviro ndakarohwa nehana. Ndakati ndichibata so kuti ndibvisa chimuti ndinzwa aaah inyama nhete munhu ndokubva avhunduka apa rainge riri zimboro rakafuta nekureba kuita kunge danda apa riri dema dema ndakatanga kuti sorry ndanga ndaona kunge chimuti. Nezemo randainge ndinaro ipapo ndakanzwa kuzasi kwangu chiveve chiya chawedzera apa hunyora kuita kunge munhu azviitira weti, ndakabva ndayenda kutoilet kwandaiyenda ndokubva ndadzoka ndikagara pasofa apa mukomana wemombe ainge amuka manje ne night dress rangu rairatidza zvidya panze imimi kaimi.
Ndakaona chimusoro chemboro chichiita kudongorera paside reshort ndikaziva kumboro yake yainge yatsamwa ndipo pandakagara pasi paainge akawaridza ndikamuti sori apa ruoko rwangu rwuchisverera zimboro riya imi unombovhunduka kuti zimboro rese iri rakapihwa munhu akadai asina kana shungu nekurishandisa pamwe ibasa rake raiyita kuti agare ari busy. Ndakatanga kuripurizira ndikanzwa munhu adaira ndikubva ndarara ndakatarisa mudenga ndikarinza zimboro riya tichitsemura maside ebeche rangu richinyura rese. Paakanzwa kuti rese rapinda mukomana akakoira iyeye zviya zvekuti aiziva kuti haafe akawana mukana wakadai futi apo inini chikapa ndaigona apa ndichinzwa kuti beche rese rakazara mboro kana space yemweya painge pasina. Ndakasvirwa nemufudzi ndikanganwa kuti ndinemurume. Kubva muso iwoyo ndinotsvaga way yekuti ndiyende kumusha ndega kuti ambondisvira futi.
Updated: March 1, 2018 — 6:27 pm